Sapphire Crystal HTC U Ultra ကိုinပြီ ၁၈ ရက်တွင်ဥရောပ၌ဖြန့်ချိမည် Androidsis
HTC က၎င်း၏စမတ်ဖုန်းကိုတင်ပြခဲ့သည် CES 2017 ကာလအတွင်း ဦး Ultra, ယခုနှစ်တွင်ကြေညာမည့်ပထမဆုံး Premium စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာသည်။ ကုမ္ပဏီကပြောကြားသည်မှာနီလာကျောက်ကပ်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
အစပိုင်းတွင်လူတိုင်းကထင်ခဲ့တယ် နီလာကြည်လင်သည့် HTC U Ultra ထိုင်ဝမ်ဈေးကွက်ကိုသာကန့်သတ်လိမ့်မယ် HTC သည်ဤ model ကိုအခြားနိုင်ငံများသို့လည်းရည်ရွယ်သည်။ ယခုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာတွင် Sapphire crystal ပါဝင်သည့် U Ultra version ကိုGermanyပြီ ၁၈ ရက်မှစ၍ ဂျာမနီနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တို့တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းမှာယူရို ၈၄၉ ဖြစ်သည်။
HTC U Ultra ၏စံပုံစံကိုယူဆောင်လာသည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Corning Gorilla Glass ကို5၎င်းမှာဥရောပတွင်စျေးနှုန်း ၆၉၉ ယူရိုရှိပြီးစျေးကွက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသော VAT အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
1 Sapphire Glass သည်ကာကွယ်မှုပိုမိုပေးနိုင်သော်လည်း Gorilla Glass coating ထက် ပို၍ ကုန်ကျသည်
2 HTC U Ultra သတ်မှတ်ချက်များ
Sapphire Glass သည်ကာကွယ်မှုပိုမိုပေးနိုင်သော်လည်း Gorilla Glass coating ထက် ပို၍ ကုန်ကျသည်
နီလာကျောက်ဆစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည် HTC U Ultra ၏မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုသည် အခါအားလျော်စွာခြစ်ရာများသို့မဟုတ်ခြစ်ရာများ၌အာရုံခံကိရိယာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဖန်ခွက်အမျိုးအစားကိုအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Apple Watch နှင့်အခြားပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Gorilla Glass ထက် ပို၍ စျေးကြီးပြီး Shocks နှင့် drop များမှကာကွယ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
HTC U Ultra သတ်မှတ်ချက်များ
Sapphire crystal ပါဝင်သည့် HTC U Ultra ကို ၈၈၀ ယူရိုဖြင့်ထိုင် ၀ မ်တွင်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာမှာရှိတယ် standard HTC U Ultra ကဲ့သို့တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Snapdragon 821 ပရိုဆက်ဆာ octa-core 2.15GHz RAM 4GB.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ terminal သည် internal memory 128GB အထိယူဆောင်လာပြီး screen ၏အရွယ်အစားမှာ ၅.၇ လက်မရှိပြီး resolution မှာ 5.7 x 2560 pixels ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, အနောက်ဘက်ကင်မရာတွင် 12 megapixels ရှိပြီး F / 1.8 ကို aperture ရှိသည်နှင့်မိုဘိုင်းသည် 4K ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်သောအသံများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ HTC U Ultra ၏ရှေ့ဖက်တွင်၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် ရှေ့ကင်မရာ 16 megapixel.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် terminal တွင် 3000 mAh ဘက်ထရီကိုလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သောနည်းပညာနှင့်လက်ဗွေဖတ်စနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
၅.၇ လက်မ Super LCD 5,7 Quad HD မျက်နှာပြင်
2 လက်မ 160 x 1040 အလယ်တန်းမျက်နှာပြင်
Snapdragon 821 quad / core chip သည် 2.15 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
64/128 GB ကို internal သိုလှောင်မှု
အနောက်ဘက်ရှိ 12 MP UltraPixel ကင်မရာ ၂.၅.၅ micro၊f/ 2၊ OIS PDAF၊ Laser AF၊ dual-ton flash၊ 1,55D အသံဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊
16 MP ရှေ့ကင်မရာ၊ BSI, UltraPixel mode၊ 1080p ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
quick တာဝန်ခံ 3.0
USB 3.1 Gen 1, Bluetooth 4.2၊ Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS, GLONASS, Beidou
အရွယ်အစား: 162.41 x ကို 79.79 x ကို 7.99 မီလီမီတာ
ဒီအချိန်မှာ, HTC သည်အခြားအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်U (Ocean) သည် 6GB RAM နှင့် Qualcomm Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Sapphire crystal HTC U Ultra ကိုinပြီ ၁၈ ရက်တွင်ဥရောပ၌ပြသမည်
Adobe သည်သင်ကိုယ်တိုင် selfie တိုးတက်စေရန် Artificial Intelligence ကိုအသုံးပြုလိုသည်